Wararka - Sida loo doorto kululeeyaha oksijiinta iyadoo loo eegayo baahida jidhka?
Mashiinka Neefta/Mashiinka Ventilator
Goonida Gooni -isutaaga
Tijaabada Degdega ah ee Covid-19
Kormeeraha Cadaadiska Dhiigga
Glucometer -ka Dhiigga
Sida loo doorto kululeeyaha oksijiinta iyadoo loo eegayo baahida jidhka?
Daryeelka caafimaadka maalinlaha ah: 76% shaqaalaha qoorta-cad ayaa ku jira xaalad caafimaad-hoosaad ah. Dadka isticmaali kara waxaa ka mid ah shaqaalaha xafiiska cad-cad, barnaamijyada, haweenka uurka leh, iwm, shirkado wanaagsan, niman wanaagsan, waxayna u diyaarin karaan koronto-dhaliye daryeel caafimaad shaqaalaha iyo kuwa jecel.
1-2L waa nooc daryeel caafimaad. Isticmaalka maalinlaha ah, marka aad neefsato xoogga ugu badan ee oksijiin ee ay soo saarto 1 ama 2L ururiye ogsajiin oo aad gaadho 93%, fiirsashada oksijiinta ee alveoli waa 24-26%. Dadka qaangaarka ah, ma beddeli karaan astaamaha, waxaa loo arki karaa oo kaliya oksijiin dhiig oo dhammaystiran.
Mishiinka 5-10L plateau generator-ka ayaa sidoo kale ka mid ah daryeelka caafimaadka + nooca daaweynta. Marka la eego baahida hooseysa, iyo shuruudaha kala duwan ee deegaanka laga soo iibsado robotka, awoodda mashiinka iyo shuruudaha kale, maqaalkan ma tilmaami doono. Mar dambe, waxaan qori doonaa maqaal gaar ah oo ku saabsan sida loo doorto mashiinka taagga. , Waxaa lagugula talinayaa inaad marka hore ii fiirsato.
Daaweyn caafimaad: Dadka la ildaran cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, wadne-xannuunka, dhiig-xinjirowga maskaxda, dhiig-karka, oof-wareenka, boronkiitada, neefta ama wadne-xannuunka sambabada, neefsashada oksijiinta muddada-dheer waxay yeelan doontaa saameyn daaweyn oo wanaagsan.
Xagga sare ee 5L waxaa iska leh nooca daweynta. Markaad neeftuugto ogsijiintii ugu badnayd ee ay soo saarto 5 ama 8L ururiye ogsajiin oo aad gaadho 93%, fiirsashada oksijiinta ee alveoli waa 33-41%. Bukaanka, ogsijiin ku filan ayaa la siin karaa. Waxay hagaajin kartaa difaaca jirka oo dhammaystiran, nadiifin kartaa habdhiska neefsashada, waxayna hagaajin kartaa shaqada xubnaha gudaha.
Sharaxa socodka: Ku celi weedh leh ka -fiirsasho oksijiin oo ka badan 90%, iyo heerka socodka ugu badan ee soo -saaraha oksijiinta ayaa go'aamiya inta litir ee ay tahay.
Socodka waxaa ka mid ah laba dhinac: socodka oksijiinta oo xooga saaraya in ka badan 90% iyo socodka ugu badan.
Ganacsiyada qaarkood waxay isticmaali doonaan heerka socodka ugu badan ee uruuriyaha ogsajiinta si ay iskaga dhigaan heerka socodka qulqulka oksijiinta ee caadiga ah si loo jahawareeriyo fikradda. Qof walba waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa kala soocidda.
Qaado matoor 3L oo oksijiin ah tusaale ahaan. Fiiri sawirka hoose. Markaad hagaajiso socodka 0,5L-3L, diiradda oksijiintu waa 93%, taas oo ah qiime caadi ah. Marka heerka socodka la isku hagaajiyo 4 iyo 5L, diirada oksijiinta ayaa si dhakhso ah ugu dhacda 82%-78%, taas oo ah socod been ah.
Sidee loo xukumaa dacaayadda marin habaabinta ah ee meheradda urursiga oksijiinta ee socodka?
Markaad iibsaneyso koronto -dhaliyaha 5L ee oksijiinta, weydii iibiyaha, miyirka ogsijiintu ma gaari karaa in ka badan 90%?
Isticmaal qalabka baaritaanka dhinac saddexaad si aad u hubiso ku-uruurinta dhabta ah ee oksijiinta. Tixraac qalabka hoose.
Hangzhou Gravitation Medical Equipment Co., Ltd. waxay ku takhasustay soo saarista iyo iibinta urursiga oksijiinta.
Waqtiga dhejinta: May-24-2021
Waxaan rajeyneynaa inaan noqono xoog muhiim u ah meheradda ganacsiga adduunka oo aan abuuri karno taxane sumado caan ah annagoo isla korinayna macaamiisheena.
Qolka 210, Dhismaha B, Qiantang 505, No. 23 Wadada Baiyang, Qiantang Degmada Cusub, Magaalada Hangzhou, Gobolka Zhejiang, Shiinaha, 310018